Pita kọọrọ ndịozi ndị ọzọ ihe merenụ (1-18)
Banabas na Sọl gara Antiọk nke dị na Siria (19-26)
Mgbe mbụ a kpọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs Ndị Kraịst (26)
Agabọs buru amụma na ụnwụ ga-ada (27-30)
11 Ndịozi na ụmụnna nọ na Judia nụrụ na ndị mba ọzọ anabatala okwu Chineke. 2 Ma, mgbe Pita gbagotere Jeruselem, ndị chọrọ ka ndị mba ọzọ na-ebi úgwù+ malitere ịkatọ ya, 3 na-asị: “Ị banyere n’ụlọ ndị a na-ebighị úgwù, sorokwa ha rie ihe.” 4 Pita wee bido ịkọwara ha ihe niile merenụ, sị: 5 “Anọ m na Jọpa na-ekpe ekpere, mechaakwa hụ ọhụụ. Ahụrụ m ka e ji ihe dị ka nnukwu ibé ákwà linin aka n’isi anọ ya, si n’eluigwe na-ewedata ya n’ụwa, ya erutekwa nnọọ n’ebe ahụ m nọ.+ 6 Mgbe m lebara anya n’ime ya, ahụrụ m anụ ndị nwere ụkwụ anọ, anụ ọhịa, anụ ndị na-arị arị,* na nnụnụ. 7 Anụkwara m olu sịrị m: ‘Pita, bilie, gbuo otu n’ime anụ ndị a rie.’ 8 Ma m sịrị: ‘Onyenwe anyị, mbanụ, n’ihi na ihe rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na-adịghị ọcha abatụbeghị m n’ọnụ.’ 9 Olu ahụ nke si n’eluigwe sịrị nke ugboro abụọ: ‘Kwụsị ịkpọ ihe Chineke mere ka ha dị ọcha ihe rụrụ arụ.’ 10 Ihe a mere ugboro atọ, e buruzie ihe niile ahụ bugoo eluigwe. 11 N’otu oge ahụkwa, ụmụ nwoke atọ guzo n’ihu ụlọ ahụ anyị nọ. E si Sizaria zite ha ka ha bịa hụ m.+ 12 Chineke wee jiri mmụọ nsọ gwa m ka m soro ha gawa n’enweghị obi abụọ ọ bụla. Ụmụnna isii ndị a sokwa m gaa, anyị abanye n’ụlọ nwoke zitere ndị ahụ bịara hụ m. 13 “Ọ kọọrọ anyị otú o si hụ mmụọ ozi bịara guzoro n’ụlọ ya, sị ya: ‘Ziga ndị ozi Jọpa ka ha gaa kpọọ Saịmọn, onye a na-akpọ Pita.+ 14 Ọ ga-agwa gị otú a ga-esi zọpụta gị na ezinụlọ gị.’ 15 Ma mgbe m malitere ikwu okwu, mmụọ nsọ dakwasịrị ha otú ahụ ọ dakwasịrị anyị ná mmalite.+ 16 M wee cheta ihe Onyenwe anyị na-adị ekwu: ‘Jọn ji mmiri mee ndị mmadụ baptizim,+ ma a ga-eji mmụọ nsọ mee unu baptizim.’+ 17 N’ihi ya, ọ bụrụ na Chineke nyere ha otu onyinye ahụ ọ na-enye n’efu otú o nyekwara anyịnwa bụ́ ndị kweere n’Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ònye ka m bụ igbochi Chineke ime ihe ọ chọrọ ime?”+ 18 Ma mgbe ha nụrụ ihe ndị a, ha kwụsịrị ịkatọ ya,* wee nye Chineke otuto, sị: “Ọ bụrụ otú ahụ, Chineke chọkwara ka ndị mba ọzọ chegharịa, ka ha wee nweta ndụ.”+ 19 Mgbe e gbuchara Stivin, a malitekwara ịkpagbu ndị kwere ekwe ndị ọzọ. N’ihi ya, ha gbagara+ Finishia, Saịprọs, na Antiọk. Ma, ọ bụ naanị ndị Juu ka ha nọ na-ezi ozi ọma.+ 20 Ma, ụfọdụ n’ime ha ndị si Saịprọs na Saịrini gara Antiọk, malite izisara ndị na-asụ Grik ozi ọma banyere Onyenwe anyị Jizọs. 21 Jehova* nọnyekwaara ha. Ọtụtụ ndị ghọrọ ndị kwere ekwe ma malite iso ụzọ Onyenwe anyị.+ 22 Ọgbakọ dị na Jeruselem nụrụ gbasara ha. Ha wee ziga Banabas+ Antiọk. 23 Mgbe o ruru wee hụ otú Chineke si na-emere ndị na-eso ụzọ Jizọs amara, ọ ṅụrịrị ọṅụ ma malite ịgba ha niile ume ka ha jiri obi ha niile na-eso ụzọ Onyenwe anyị.+ 24 Banabas bụ ezigbo mmadụ. O nwere okwukwe, jupụtakwa na mmụọ nsọ. N’ihi ya, ọtụtụ ndị bịara kwere n’Onyenwe anyị.+ 25 Ọ gawara Tasọs ịga chọọ Sọl.+ 26 Mgbe ọ hụrụ ya, ha abụọ sooro gaa Antiọk. Ruo otu afọ zuru ezu, ha nọ na-eso ọgbakọ dị ebe ahụ ezukọta, ha kụzikwaara ìgwè mmadụ ihe. Antiọk bụkwa ebe mbụ a kpọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs Ndị Kraịst otú Chineke si chọọ.+ 27 N’oge ahụ, ụfọdụ ndị amụma+ si Jeruselem gaa Antiọk. 28 Otu n’ime ha bụ Agabọs.+ O si n’ike mmụọ nsọ kwuo na oké ụnwụ ga-ada n’ụwa niile.+ Ụnwụ a mechara daa n’oge Klọdiọs. 29 N’ihi ya, ndị na-eso ụzọ Jizọs kpebiri izigara ụmụnna ha bi na Judia ihe enyemaka+ otú aka onye nke ọ bụla n’ime ha hà.+ 30 Ha mekwara ihe a ha kpebiri, si n’aka Banabas na Sọl zigara ndị okenye ihe ndị ahụ.+
^ Na Grik, “ha gbachiri nkịtị.”